Pot-O-Gold Touchscreen Multi-Game Board - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » Pot-O-Gold Touchscreen Multi-Game Board
၂၈ ပင်အိုးအိုး - ရွှေကြိုးကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
စံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ် 36/10 ပင်ချယ်ရီမာစတာကြိုး
လက်အရေအတွက် & ရရှိနိုင်စဉ်ဆက်မပြတ်လှည့်ဖျား
POG software ဗားရှင်း 580
Shamrock7ရဲ့
အမြင့် roller ဂျက်
ရွှေ Row အပိုဆု
လှည့်ဖျား Ball ကိုအပိုဆု
စူပါကို double-Up ကို Keno
Easy Keno ကိုနှိပ်ပါ
POG software ဗားရှင်း 510
စူပါ Pick Lotto
Double-Up ကို Keno
စူပါကို double-up ကို
POG software ဗားရှင်း 595 (ကစားသမားသည်စပိန်သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရွေးချယ်နိုင်သည်)
ထိပါ6Lotto
POG software ဗားရှင်း 581
Spin Ball ကို Respin
POG software ဗားရှင်း 371
Deuces တောရိုင်း x 2
Shamrock7ရဲ့က x 3
10's သို့မဟုတ်သာ။ ကောင်း၏
POG software ဗားရှင်း 400 X
အထိုင် ဂိမ်း စာရင်း
ပို့ဆောင်ချိန် :3DHL မှတဆင့်ရက်ပေါင်း
1. Topgame software ကို R ကို&တရုတ်နိုင်ငံတွင် D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
က: ၀ ယ်ယူသောအခါကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲနှင့်ဝါယာကြိုးညွှန်ကြားချက်ကိုသင်ကိုးကားနိုင်သည်. လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းအကူအညီများကိုအမြဲပေးမည်.
အဆိုပါဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့: 12-ဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ တစ်လအာမခံ.
က: အရောင်းအကြိုဝန်ဆောင်မှု: စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု. အတိုင်ပင်ခံပံ့ပိုးမှု.
After-Sales Service: တစ်နှစ်မူလအာမခံ, မူရင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ပြည်ပတွင်ရရှိနိုင်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု.
က:3DHL မှတဆင့်ရက်ပေါင်း